बैंकका सीईओले ‘जोसमा होस्’ गुमाउँदा ५ भाई पक्राउ, के हो घटना ? – List Khabar
Home / समाचार / बैंकका सीईओले ‘जोसमा होस्’ गुमाउँदा ५ भाई पक्राउ, के हो घटना ?
बैंकका सीईओले ‘जोसमा होस्’ गुमाउँदा ५ भाई पक्राउ, के हो घटना ?
admin November 14, 2021 समाचार Leaveacomment 62 Views
काठमाडौं – कुमारी बैंकका कामु सीइओ अनुजमणि तिमिल्सीनाले ‘जोसमा होस्’ गुमाउँदा ५ जना व्यक्ति प्रहरी हिरासतको चिसो कस्टडिमा सडेका छन् ।
फिलिपिन्समा एमबीए पढ्दाका ‘रुम मेट’ साथीले किर्ते लालपूर्जा लिएर आउँदा जोसमै ऋण प्रवाह गरेका कारण अहिले ५ जना प्रहरीको हिरासतमा दिन विताइरहेका छन् । चर्चित गायक योगेश्वर अमात्यको बाराको विश्रामपुरमा रहेको १२ विगाहा जग्गा किर्ते प्रकरणको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले ५ जनालाई पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ पर्नेमा बैंकको बारा शाखाका ऋण अधिकृत सोनु ठाकुर, मूल्यांकनकर्ता राजेश चौरसियासहित नक्कली जग्गा धनी एसके महर्जन, मुक्तिलाल गौतम र सीइओ तिमिल्सीनाका रुम मेट विचौलिया कुसुम प्रधान छन् ।
के हो घटना ? गायक अमात्य विशेष कामका लागि नेपाल बाहिर थिए । बाराको विश्रामपुरमा रहेको १२ विगाहा जग्गा खाली भएपछि धेरैले आँखा लगाउने नै भए । नेपाल फर्किएपछि उनी र उनकी श्रीमती सञ्चालक रहेको विरुवा भूमिवन प्रालिको नाममा रहेको जग्गाको किर्ते लालपूर्जा बनाई एसके महर्जन र मुक्तिलाल गौतमले १९ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको चाल पाए ।
आफ्नो जग्गाको नक्कली लालपूर्जा बनाएर १९ करोड ऋण समेत निकालेको थाहा पाएपछि उनी यसबारे बुझ्न कुमारी बैंकको न्यूरोड शाखासम्म पनि पुगे । बैंकले प्रष्ट जवाफ नदिएपछि उनी दशैंअघि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को महाराजगञ्जस्थित कार्यालयमा पुगेर उजुरी दिए ।
अमात्यको उजुरीको आधारमा छानविन थालेको सीआईबीले अहिले ५ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानका क्रममा नक्कली धनी पूर्जाका आधारमा प्रवाह गरेको ऋण कुमारी बैंकले उठाइसकेपछि मात्र गायक अमात्यले आफ्नो जग्गाको पूर्जा अर्कैले बनाएको थाहा पाएका थिए ।
नक्कली कागज बनाएर धितो राखेको चाल पाएपछि कुमारी बैंकको बारा शाखाले १९ करोड रुपैयाँ ऋण असूली गरेको पाइएको सीआईबीका निर्देशक धिरजप्रताप सिंहले बताए । अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार बैंकले नक्कली धनी पूर्जा धितो राखिएको थाहा पाएपछि नक्कली जग्गा धनी महर्जनको अर्को जग्गा धितो राखेर ऋण निकाल्न लगाएको थियो र त्यसबाट पुरानो ऋण असूली गरेको पाइएको छ ।
Previous भुपेन्द्र’माथि खु ‘कु,रि प्र’ हा’र भएपछि बजैको घरमा यसरी पुगेका थिए ,बजैले खु’लाइन सबै बा’स्तविकता (भिडियो)
Next स्कूलमा शिक्षकले धेरै होमवर्क दिएपछि सबै बच्चाहरुले मिलेर लिए यसरी ब’द’ला कि आमाबुवा छक्क परे …